अनौठो चिंडियाखानाः मान्छे पिंजडाभित्र, सिंह रहन्छ बाहिर ! (भिडियो)
२०७२ चैत १९ शुक्रबार, एजेन्सी। जंगलको राजा मानिने सिंहलाई उसको प्राकृतिक बासस्थानमा नजिकबाट देख्नु हरकोही सर्वसाधारणका लागि एक अद्भुत अनुभूति हुन सक्छ। अझ सिंहलाई आफ्नै हातले नजिकबाट खाना खुवाउनु वा आहार दिनु त सामान्य मानिसका लागि सपना जस्तै नै हो। ... बाँकी अंश»
जापानमा छ संसारको सबैभन्दा ठुलो 'आर्टिफिशियल बीच' (भिडियो)
२०७२ चैत १९ शुक्रबार, एजेन्सी। 'आर्टिफिशियल बीच'हरु हङ्गकङ्ग, बर्लिन र टोरन्टो सहित पुरै संसारमा प्रख्यात रहेका छन्। तर, जापानको मियाजाकीमा अवस्थित 'बीच' संसारकै सबै भन्दा ठूलो 'आर्टिफिशियल बीच' हो।यस 'आर्टिफिशियल बीच' को नाम सीगाईया ओशन डोम हो। ... बाँकी अंश»
मानव निर्मित ७ आश्चर्य मध्येको ग्रेटवाल
२०७२ चैत १८ बिहिबार, एजेन्सी । बिश्व आश्चर्य नै आश्चर्यले भरिपूर्ण छ । कतै मानव निर्मित आश्चर्य छन् त कतै प्राकृतिक । मानव निर्मित आश्चर्य मध्ये चीनको "द ग्रेट वाल" एउटा चकित तुल्याउने मध्येको एउटा आश्चर्य हो । अन्तरिक्षबाट पनि देखिने भनिएको यो वाल ५ औ शताब्दी ईसापूर्व देखि सोह्रौ शताब्दीसम्म बिभिन्न शाषकहरुले २० देखि ३० लाख मनिसहरुलाई जीवनभर काम लगाएर निर्माण गरिएको बिश्वास गरिन्छ । समय सयममा यसलाई पूर्न निर्माण गरिदै आएको छ । यसलाई २२०-२०६ ई.पू.मा चीनको प्रथम स ... बाँकी अंश»
फोटो खिच्दा खिच्दै भालुले खेदाएपछि !
२०७२ चैत १८ बिहिबार, एजेन्सी। नेशनल जियोग्राफिको फोटोग्राफर्सहरुले हरेक बर्ष लाखौ फोटो खिच्ने गर्दछन्।तर त्यस मध्ये सबै पब्लिश गरिदैन। यो काम धेरै ग्राह्रो हुन्छ। उनीहरु राम्रा फोटोग्राफर मात्र नभएर राम्ररी दोडन सक्ने पनि हुनुपर्दछ। फोटो खिच्दै गर्दा जानवर उनिहरु माथि आक्रमण गर्न खोज्छन् र ज्यान बचाउनकी लागि उनिहरु यसरि भाग्नु पर्दछ। ... बाँकी अंश»
४० हजार मानव हड्ड़ीहरुबाट बनेको अद्भुत चर्च
२०७२ चैत १७ बुधबार, एजेन्सी। यो कुरा सुन्दा पनि तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ कि कुनै चर्च मानव अस्थिपंजरबाट भन्न पनि सक्छ भनेर। तर यो अकल्पनिय सत्य हो कि विश्वमा यस्ता मानव निर्मित इतिहासहरु पनि छन्। सेडलेक आस्युअरी नाम गरेको यो चर्च यूरोप महादेशको चेक गणराज्यमा अवस्थित छ। यस चर्चमा ४० हजार मानव हड्ड़ीको कलात्मक रुपले सजाएर राखिएको छ। त्यसैले यसलाई द चर्च अफ बोन पनि भन्ने गरिन्छ। ... बाँकी अंश»
कलियुगको बारेमा के भविष्यवाणी गरिएको छ भागवत पुराणमा
२०७२ चैत १७ बुधबार, एजेन्सी । श्रीमद्भागवत पुराण हिन्दू समाजको सर्वाधिक आदरणीय पुराण हो। यो वैष्णव सम्प्रदायको प्रमुख ग्रन्थ हो। यस ग्रन्थले वेद, उपनिषद तथा दर्शन शास्त्रको गौण एवंम रहस्यमय विषयहरुलाई अत्यन्त सरलताको साथ दर्शाउदछ। यसलाई हिन्दु धर्म र संस्कृतिको विश्वकोष भनिन्छ। करोडौ वर्ष देखि यो पुराणले हिन्दू समाजको धार्मिक, सामाजिक र लौकिक मर्यादा स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७२ चैत १६ मंगलबार, एजेन्सी। समाज दिनानुदिन आधुनिकतातर्फ गैरहेको छ। नयाँनयाँ कुराको आविस्कार भएसंगै विज्ञानले पनि प्रगति गरिनै रहेको छ। हामीले रोबोटको बारेमा सुनेका र रोबोटले काम गरेको पनि देखेका छौं। यो त भयो पुरानो कुरा। तर अब सेक्सको लागि पनि रोबोट अर्थात् खेलौनाको प्रयोग प्रायशः सामान्य भैसक्यो। शारीरिक सुखका लागि पार्टनरको विकल्पको रुपमा निर्माण गरिएको सेक्स टोयहरुलाई उदारवादी देशका मानिसहरुले निकै नै प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। मानिसलाई काल्पनिक से ... बाँकी अंश»
२०७२ चैत १५ सोमबार, एजेन्सी। ‘‘नर्कतर्फ जाने बाटो पनि राम्रै उद्देश्यले बनेको हुन्छ’’, अमेरिकी विवाहित पुरुषहरू यस्तै भन्छन् । उनीहरूको भागमा घरको काम बढी तथा यौन आनन्द कम भएको उनीहरूले बताएको बुधबार प्रकाशित समाजशास्त्रसम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा परम्परागत रूपमा महिलाले गर्ने खाना पकाउने, सफाइ गर्ने तथा खरिददारी गर्ने जस्ता घरेलु काममा अधिक समय विताउने पुरुषले शारीरिक काम गर्ने पुरुषको तुलनामा कम यौन आनन्द लिन पाएको ... बाँकी अंश»
मुखले माछा मार्ने अनौठो खेल !
२०७२ चैत १४ आइतबार, एजेन्सी। जापानी भोजमा काचो माछाको परिकार पुरै संसार भरनै प्रख्यात रहेको छ। तर चीनमा जापानी सामानलाई मन पराईदैन।यहाँ चीनीयाँ नागरिकहरु आफ्नो देश र छिमेकी देश बीचको सत्रुतालाई ठट्टाको बिषय बनाउन गर्दछन। चीनको गुईझाऊ प्रांन्तको तेजियाङ्ग काउन्टीमा माछा मार्ने अचम्मको प्रतियोगिता हुने गरेको छ।त्यस प्रतियोगितामा माछा मार्ने काम हातले होइन मुखले गर्नुपर्ने हुन्छ। मुखमा आएर पनि माछा छुट्ने गर्दछ र यसमा खेलाडिहरुले धेरै मेहनत गर्नु पर्दछ। यो ... बाँकी अंश»
सुन्दरताको लागि ओठ छेढ्ने सूरी जातिको दर्दनाक प्रथा !
२०७२ चैत १४ आइतबार, एजेन्सी। यो हेर्दा साच्चिकै आश्चर्य लाग्न सक्छ तर इथियोपियाका सूरी जनजातिका महिलाहरुद्वारा ओठमा प्लेट लगाउने चलन रहेको छ। सूरी जनजातिमा यसरी प्लेट लगाउनु सुन्दरताको प्रतिक मानिन्छ। इथियोपियाको दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रमा बस्ने यि जनजातिहरुलाई 'सूरमा' नामबाट चिनिन्छ। जनजातिको यो अनौठो प्रथा अनुसार, महिलाहरुले यौवन अवस्थामा प्रवेश गर्दै गर्दा उनिहरुको दुई दाँत तोडेर र ओठ काटेर पुवाल बनाउने प्रचल रहेको छ। ... बाँकी अंश»
के तपाईले 'पेन्टी' लगाएको फल खानु भएको छ ?
२०७२ चैत १३ शनिबार, एजेन्सी। तपाईले महिलाहरुले लगाउने कयौ डिजाइनका भित्रिवस्त्र देख्नु भएको होला तर के तपाईले कहिले फलफूलले त्यस्तो भित्रिवस्त्र लाएको देख्नु भएको छ? फलफूलको प्याकिङ्गको लागि त्यस्तै कपडा तयार गरिएको छ जसले फलफूललाई अधिक आकर्षित बनाउनेछ। ... बाँकी अंश»
११.५ इन्च लामो दाह्री भएकी महिला !
२०७२ चैत १३ शनिबार, एजेन्सी।अमेरीकाको लसभेगास शहरमा बस्ने जेसा नाम गरेकी एक महिलाका अनुसार उनी सवै भन्दा लामो दाह्री भएकी महिला रहेको बताएकी छन् । २९ वर्षीय महिलाको दाह्रीको रौ को लम्बाई ११.५ इन्च रहेको छ र दाह्री पाल्नु उनको सोख रहेको छ। उनले शरिरमा ट्याटु पनि खोपेकी छिन्।उनी घर पालुवा सर्पलाई चुमबन गर्न मन पराउछिन्। ... बाँकी अंश»
टेलिभिजन स्टारको बढेमानको स्तन !
२०७२ चैत १३ शनिबार, एजेन्सी । अमेरिकी टेलिभिजन स्टार ल्यान्सी वाइल्ड विश्वमै ठूलो स्तन भएकी महिलाहरुको सुचीमा ७ औं नम्बरमा पर्ने गर्छिन् । उनले आफ्नो स्तनको १२ औं पटक प्लास्टिक सर्जरी गरेकी छिन् । ल्यान्सीलाई आफ्नो ठूलो स्तनका कारण सुत्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने उनलाई आफ्ना छोराछोरीका अगाडि स्तनका कारण थोरै लाज पनि लाग्छ । उनका ६ सन्तान छन् । पछिल्लो मंगलबारका दिन यिनै ल्यान्सीलाई अमेरिकाको मियामी समुन्द्री तटमा देखियो । त्यो अवसरमा उनको बढेमानको स्तन खुलेरै दे ... बाँकी अंश»
२०७२ चैत १२ शुक्रबार, एजेन्सी। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा फोटाहरु शेयर गर्नु सामान्य बिषय हो। तर फोटाहरु हेरेर तपाई पेट मिचि मिचि हास्न चाहानुहुन्छ भने हामिले यस ग्यालरिमा केहि हसाउने तस्विरहरु प्रस्तुत गरेका छौ जो फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो वालमा शेयर गरेका छन्। ... बाँकी अंश»
२०७२ चैत १२ शुक्रबार, एजेन्सी। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा फोटाहरु शेयर गर्नु सामान्य बिषय हो । तर फोटाहरु हेरेर तपाई पेट मिचि मिचि हास्न चाहानुहुन्छ भने हामिले यस ग्यालरिमा केहि हसाउने तस्विरहरु प्रस्तुत गरेका छौ जो फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो वालमा शेयर गरेका छन् । हेरौ केहि तस्विरहरु । ... बाँकी अंश»
आँखा झुक्याउने केही दुर्लभ तस्वीर
२०७२ चैत ११ बिहिबार, एजेन्सी। फोटो खिच्नको लागि सधै सहि समय र एङगलको आवश्यकता पर्दछ। परफेक्ट टाइमिङ र सही एङगलले फोटोलाई आर्कषक बनाउछ। केहि फोटाहरु नियोजित रुपमा खिच्ने गरिन्छ। तर कयौँ पटक बिना कुनै टाइमिङ र एङगलमा खिचिएका फोटाहरुले पनि आश्चर्य उत्पन्न गर्दछ। ... बाँकी अंश»
२०७२ चैत ११ बिहिबार, एजेन्सी। शहरको ब्यस्त ठाउँमा कसैले लाखौं रुपिया फाले भने के होला ? सायद पैसा टिप्नेको तछाड-मछाड वा हेरे बस्ने भीड नै हुन्छ होला । तर दक्षिण कोरियामा यस्तै घट्ना हुँदा कसैले पनि वास्ता नगरेको समाचार कोरियन मिडियामा छाएको छ। कोरियाकी एक ५६ बर्षिया महिलाले १९,०३० डलर बराबरको कोरियन वोन राजधानी सोलमा फालेकी छिन्। उनले उक्त रकम फाल्दा पनि कुनै पनि ब्यक्तीले पैसा उठाएनन्। पैदलयात्रुहरुले उक्त छरिएर रहेका पैसाको फोटो खिचे तर कसैले पनि उठाएनन्- प्र ... बाँकी अंश»
संसारकै संभवत: खतरनाक गोरेटो; काठको फल्याक निर्मित पहाडी बाटो (भिडियो)
२०७२ चैत ११ बिहिबार, एजेन्सी। विश्वमा धेरै ठाउँहरु मनमोहक, रहरलाग्दा र जाउवजाउँ लाग्ने खालका हुन्छन। तर कति ठाऊँ जानकालागि ज्यानको जोखिम पनि हुन्छ। संसारमा यस्ता धेरै मानिसहरु छन जो जोखिमयुक्त काम गर्न रुचाउँछन र त्यस्ता जोखिमलाई जिवनको एक अंशको रुपमा लिन्छन्। जोखिमयुक्त खेलमा पनि मानिसहरु रमाईरहेकै हुन्छन जस्तै: बन्जी, स्काईडाईव, र्‍याफटिङ आदि ईत्यादी अरु त्यस्ता जोखिम भरिएका खेलहरुमा पर्वतारोहण पनि पर्छ । यस्ता खेलकालागि तालिमहरु पनि हुने गर्छन। ... बाँकी अंश»
२१ वर्षीया स्टोडेनको बडेमानको स्तन !
२०७२ चैत १० बुधबार, एजेन्सी । अमेरिकी टेलिभिजन पर्सनालिटी क्राउन्टिनी स्टोडेन मात्रै २१ वर्षकी छिन् । स्टोडेनले ठूलो धनराशि खर्च गरेर आफ्नो स्तनको आकार बढाएकी छिन् । स्तनको आकार ठूलो भएपछि सोही आकारको बिकिनी खरिद गर्न समेत उनले महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने भएको छ । ... बाँकी अंश»